Big City Small World (Series2Episode3- Harry's New Girlfriend) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network on December 18, 2012 at 15:10 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series2Episode3- Harry's New Girlfriend (အတွဲ (၂)၊ အပိုင်း (၃) – Harry ၏ ရည်းစားအသစ်)
Series2Episode3- Harry's New Girlfriend ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
Harry ၏ ရည်းစားအသစ်အပါအ၀င် လူတိုင်းက Tony ရဲ့ ကော်ဖီဆိုင်ကို ဆက်လုက် တည်ရှိနိုင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းတွေကို စဉ်းစားနေကြပါသည်။ သို့သော် Madga ရဲ့ အလုပ်အသစ်ကတော့ အဲ့ဒီဆိုင်ကို ဖြိုချဖို့ပါ -
မင်္ဂလာပါ Tony! နေကောင်းလား?
ခင်ဗျားပျော်ပျော်နေတဲ့အသံကိုကြားရတာ ၀မ်းသာပါတယ်! အားလုံးဘယ်ရောက်နေကြလဲ?
ခင်ဗျားသိပါတယ် လူနေကြလူတွေလေ – Olivia. Sarah, Harry, Magda တို့လေ…
မသိဘူးလေ။ သူတို့ အနှေးနဲ့ အမြန်တော့ ရောက်လာမှာပါ။ သူတို့က ဒီမှာ အမြဲရှိတယ်။
အို၊ အင်၊ မင်္ဂလာပါ
ဒီမှာ ခင်ဗျားကို အရင်က မတွေ့ဖူးပါဘူး
ဟင့်အင်း၊ ကျွန်မ အရင်က ဒီကို မရောက်ဖူးဘူး
အာ၊ အိုကေ၊ စိတ်ထဲမထားပါနဲ့၊ ဒီမှာ၊ သောက်စရာ တစ်ခုခုပေးရမလား? ကော်ဖီဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုသောက်ပါလား?
အင်း၊ ဂရုစိုက်ပေးပေမဲ့လည်း ကျေးဇူးတင်စွာနဲ့ ငြင်းပါရစေ
လုပ်ပါ။ တစ်ခုခု သုံးဆောင်ပါ! ကျွန်တော် ဒကာခံပါ့မယ်။ ဒီမှာ ဘာမှမစားမသောက်ဘဲနဲ့ ထိုင်မနေပါနဲ့
တကယ်တမ်းတော့ ကျွန်မရဲ့ ရည်းစားကို စောင့်နေတာပါ
သူပေါ်မလာခဲ့ရင် ကျွန်တော့်ကို စကားပြောလို့ရပါတယ်!
ခင်ဗျားတို့ နှစ်ယောက် သိနေကြပြီပဲ…
မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်က ဧည့်ခံနေတာပါ။ သိတယ်မဟုတ်လား...
ဟုတ်တာပေါ့! Fadi မင်းကို Bindyu နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
Bindyu က ငါ့ရဲ့ ရည်းစားလေ)
အို အာ ကောင်းတာပေါ့! နှစ်ယောက်သားတွဲနေကြတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ?
အို၊ သိပ်မကြာသေးပါဘူး။ ရက်သတ္တပါတ် အနည်းငယ်ပဲရှိပါသေးတယ်။
မင်းမှာ ရည်းစားအသစ်ရသွားပြီဆို ငါ့ကိုတောင်မပြောဘူး Harry!
အင်း မင်းကို မတွေ့တာလည်း ရက်သတ္တပါတ် အနည်းငယ် ရှိပြီလေ
ဒါပေါ့။ ငါက ငါ့မိသားစုဆီကို သွားလည်နေတာကိုး... ကဲ ဒီမှာ ဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲ?
အရေးကြီးတဲ့ သတင်းကတော့ ကော်ဖီဆိုင်ကို ပိတ်ဖို့ သူတို့ကြိုးစားနေကြတယ်!
ဟုတ်တယ်။ ပြီးတော့ Olivia ရဲ့ ဆိုင်ရောပဲ
အဆောက်အဦ ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုက ဒီအနောက်မှာ တိုက်ခန်းအသစ်တွေ ဆောက်နေကြတယ်။ သူတို့က နေရာပိုရအောင် ကော်ဖီဆိုင်နဲ့ Olivia ရဲ့ ဆိုင်တို့ကို ဖြိုချချင်နေတယ်။
မဟုတ်သေးပါဘူး… သူတို့ကို တားနိုင်ဖို့ ငါတို့ဘာလုပ်နိုင်မလဲ?
အင်း ငါတို့မှာ အကြံနည်းနည်းတော့ရှိတာ်။ ဒီကို တစ်ခါတစ်လေ လာတတ်တဲ့ Carlos လိုပ ခေါ်တဲ့သူတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူက ဆောက်လုပ်ေ၇း သမားတွေဆီမှာ အလုပ်လုပ်တယ်။ သူကတော့ ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီကောင်း ကူညီနိုင်မယ်။ နောက်ပြီးတော့ Sarah နဲ့ Olivia တို့ကလည်း သူတို့မှာ အကြံအစည်တွေရှိတယ်လို့ ပြောတယ်…
ငါတို့ လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုခု လုပ်သင့်တယ်!
ကောင်းလိုက်တဲ့ အကြံ! ကျွန်မက သတင်းစာ ဆရာတစ်ယောက်ပါ။ ဒေသခံ သတင်းစာထဲမှာ အကြောင်းအရာတစ်ခုခု ရေးလို့ရတယ်
အင်၊ ငါက မင်းကို အိမ်အတွင်းပိုင်း ဒီဇိုင်း မဂ္ဂဇင်းတွေအတွက်ပဲရေးတယ် ထင်နေတာ...
အင်း၊ ဟုတ်တယ်၊ ရေးတယ်၊ အဲဒါအမှန်ပဲ။ ဒါပေမယ်ည ဒေသခံ သတင်းစာမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ သူတစ်ယောက်နဲ့ ကျွန်မသိတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မက ပိုပြီးလေးနက်တဲ့ သတင်းစာပညာကို လုပ်ချင်တာ...
ကောင်းလိုက်တဲ့ အကြံလို့ ထင်ရတာပဲ! ကံကောင်းပါစေ။ ကော်ဖီဆိုင်ရဲ့ ပြတင်းပေါက်မှာ နဖူးစည်း စာတန်း ကပ်သင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်
ဟုတ်တယ်လေ၊ သိတယ်မဟုတ်လား – “ဒို့ကော်ဖီဆိုင်ကို ကယ်တင်ကြပါစို့!” လို့ရေးထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်အကြီးကြီးလေ ဒါမှမဟုတ် အဲ့ဒီလိုမျိုး တစ်ခုခုပေါ့…
ဟေး! နင့်ကို ပြန်တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်!
အင်း... နင့်ကိုရောပဲ! ဘယ်လိုလဲ?
ကောင်းပါ့ဗျား – ငါက ကော်ဖီဆိုင်ရဲ့ ပြတင်းပေါက်မှာ – “ဒို့ကော်ဖီဆိုင်ကို ကယ်တင်ကြပါစို့!” ဆိုတဲ့ နဖူးစည်း စာတမ်း ကပ်မလို့
ကောင်းလိုက်တဲ့ အကြံ... နင်င့ါဆိုင်ကိုရော ကယ်တင်နိုင်မလား?
မျှော်လင့်ကြရတာပဲလေ! Bindyu က ဒေသခံသတင်းစာထဲမှာ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးမလို့တဲ့…
မင်္ဂလာပါ! ကျွန်မက Bindyu ပါ… Harry ရဲ့ ရည်းစားပါ… ကျွန်မက သတင်းစာဆရာ တစ်ယောက်ပါ
အိုကေ၊ ကောင်းပါတယ်။ တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်!
ဒါ Carlos ပဲ! သူလည်းပဲ ငါတို့ကို ကူညီမှာ!
အင်း၊ ကျွန်တော်မသိဘူး။ ကျွန်တော်ကူညီချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ မသိဘူး…
ခင်ဗျားဆောက်လုပ်ရေး လုပ်သားတွေအတွက် အစားအသောက် တာဝန်ယူရတယ်မဟုတ်လား?
အာ.. အင်.. ကျွန်တော့ကတော့ အဲ့ဒါ တကယ်မထင်...
ကျွန်တော်က Sarah ကို ရှာနေတာ – သူရောက်ပြီလား?
ဟင့်အင်း။ ငါကတော့ သူနောက်မှ Magda နဲ့လာမယ်ထင်တယ်... ဘာလို့လဲ?
အို အကြောင်းမရှိပါဘူး... တွေ့ချင်ယုံသက်သက်ပါ...
ဩော် ဟုတ်လား... ကြည့် ဟိုမှာ သူတို့လာနေပြီ!
Carlos ရေ ဟိုင်းပါ! နင့်ကို ပြန်တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်!
အားလုံးနားထောင်ကြပါ၊ Magda ဆီမှာသတင်းကောင်းပါလာတယ်!
ဟုတ်တယ်။ ငါ မဟာဘွဲ့ကို ဂုဏ်ထူးနဲ့အောင်တယ်!
ဒါဆိုနင် ဗိသုကာတွေဆီမှာ လခကောင်းကောင်းနဲ့ အချိန်ပြည့်အလုပ် ရပြီပေါ့!
ပြောချင်တာကတော့ ငါတို့ရဲ့ ဈေးကြီးတဲ့တိုက်ခန်းမှာ နေနိုင်ပြီ...
ပြဿနာ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်...
ငါ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဗိသုကာတွေက...
ပြီးတော့ သူတို့က ငါ့ကို အဲ့ဒါကို လုပ်စေချင်တယ်...
အင်း၊ မဟုတ်ပါဘူး – သိလား၊ သူတို့ ကျွန်မကို လုပ်စေချင်တဲ့ စီမံကိန်းက...
အဲ့ဒါက ဇိမ်ခံတိုက်ခန်းအသစ်တွေလေ... ဒီကအဆောက်အဦးပေါ့... ဒီကော်ဖီဆိုင်နဲ့ နင့်ဆိုင် ကိုပိတ်စေချင်တဲ့ သူတွေပေါ့!
Permalink Reply by Soe Soe on December 18, 2012 at 18:43
Permalink Reply by Thike Htun on December 19, 2012 at 11:00
Permalink Reply by Dayinkauk on October 17, 2013 at 17:07
Page Not Found တဲ့ ....
Permalink Reply by LinuXix on December 16, 2013 at 14:26
I can't download sound file. Please, check again admin.
Permalink Reply by Phyo Pyah Soe on January 14, 2015 at 14:51
Conversation MP3 can't be downloaded. Please help.
Permalink Reply by Ei Lay's Hubby on February 14, 2015 at 12:38
Permalink Reply by Ei Lay's Hubby on February 14, 2015 at 12:47
ဒီဖိုင်လည်းဒေါင်းမရလို့ Please help me.
Permalink Reply by Thinzar Maung on March 10, 2015 at 16:21
Cannot download Series2Episode 3.